July 20, 2021 - ApannPyay Media
July 20, 2021 by ApannPyay Media
သတိထားရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုချပြခြင်း သေဆုံးပြီးသူ ကိုယ်ထဲကပိုးက လေထဲကိုမထွက်တော့ပါ။ သူ့ခန္ဓာကို ထိကိုင်ရာကနေပဲကူးပါတယ်..အနားမှာသွားရပ်နေလို့ မကူးပါ. တကယ်တော့ ပိုအရေးကြီးတာက နာရေးမိသားစုပါ။ မိသားစုဝင်များမှာ ကူးစက်ခံတားရပြီးဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ #သူတို့နဲ့ အနီးကပ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ လေထဲကနေ လွင့်ပျံလာတဲ့ အမှုန်ထဲက ပိုးတွေက ပိုပြီး ကူးစက်လွယ်ပါတယ်••• အသက်ရှင်နေသူက အသက်ရှုထုတ်တိုင်း၊ စကားပြောတိုင်းပိုးတွေလေထဲကိုပျံ့လွင့်စေနိုင်ပြီး သေသွားပြီးသူတွေကတော့ အသက် မရှူတော့လို့ ပိုးတွေကိုလေထဲကိုမပျံ့စေတော့ပါ•• ထိကိုင်မှုကသာကူးပါတယ်။နာရေးမိသားစုများ Mask တပ်ပါ.. နာရေးကိစ္စလူနည်းနိုင်သမျှနည်းနည်းနဲ့ ဆောင်ရွက် ကြပါ… Credit ### Dar Li သတိထားရမယ့္အခ်က္ေလးတစ္ခုခ်ျပျခင္း ေသဆုံးၿပီးသူ ကိုယ္ထဲကပိုးက ေလထဲကိုမထြက္ေတာ့ပါ။ သူ႔ခႏၶာကို ထိကိုင္ရာကေနပဲကူးပါတယ္..အနားမွာသြားရပ္ေနလို႔ မကူးပါ. တကယ္ေတာ့ ပိုအေရးႀကီးတာက နာေရးမိသားစုပါ။ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ကူးစက္ခံတားရၿပီးျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ #သူတို႔နဲ႔ အနီးကပ္ေျပာဆိုဆက္ဆံတဲ့အခါ ေလထဲကေန လြင့္ပ်ံလာတဲ့ အမႈန္ထဲက ပိုးေတြက … Read more
မိခင်ဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်
မိခင်ဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော် မိခင်ဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရင်း တေးသံရှင် တင်ဇာမော် ပါကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တေးသံရှင် တင်ဇာမော် က….”ဒီနေ့ တစ်နေကုန် မနက်ကနေ ညနေအထိတောက်လျှောက်မနားတမ်း လုပ်နေရင်းက တီတီခိုင့်သတင်းကြားတော့. ခဏလောက်တော့ ထိုင်ချလိုက်ရတယ်.။ ညနေ ရောက်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဝယ်ထားတဲ့ Test kit ကိုသုံးပြီး ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်း နှာခေါင်းနှိုက်ပြီးစစ်တော့ကျမဆီ ဧည့်သည် ရောက်နေပါ‌ရောလား.။မေမေ Day7 – TZM Day 3မေမေ အမြန်ဆုံးသက်သာပါစေ.။ မေမေ့အတွက် အောက်ဆီဂျင်တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေများရော ကူညီကြတဲ့ မိတ်ဆွေများရော အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူး အထူးတင်ပါတယ်ရှင်” လို့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ … Read more
သင့်ရဲ့အသားအရည်ကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် ရေခဲတုံးလေးတွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ( ၆ ) မျိုး
သင့်ရဲ့အသားအရည်ကို ပြောင်းလဲသွားစေမယ့် ရေခဲတုံးလေးတွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ( ၆ ) မျိုး ရေခဲတုံးလေးတွေကို ရေသောက်ဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအလှအပအတွက်ပါသုံးလို့ရနေပါပြီမနက်ဖြစ်စေ၊ညဖြစ်စေရေခဲတုံးလေးတွေနဲ့မျက်နှာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပွတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကြည်လင်တဲ့အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်လာမှာပါ။ ၁=ရေခဲတုံးလေးတွေက အသားအရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ရေခဲတုံးသေးသေးလေးတွေကို မျက်နှာပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစံဖြည်းဖြည်းချင်းပွတ်တိုက်ပေးတာက အသားအရည်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းရှိစေပါတယ်။ ၂=ရေခဲတုံးလေးတွေကပ်ပေးတာက သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး သဘာဝအတိုင်းကြည်လင်လှပတဲ့အသားအရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်အသားအရည်ခြောက်တာမျိုးမရှိပဲ လန်းဆန်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ၃=အလှပြင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Primer ကုန်နေမယ်ဆိုရင် ရေခဲတုံးလေးတွေကိုအစားထိုးလို့ရပါတယ် မိတ်ကပ်သားကြာရှည်ခံစေဖို့ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင်ရေခဲတုံးလေးတွေကပ်ပေးပါ အရေးအကြောင်းတွေလျော့ပါးစေပြီး သန့်စင်တဲ့မျက်နှာအသားအရည်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ၄=ဝက်ခြံပေါက်နေတဲ့အခါ ရေခဲတုံးလေးတွေကို သန့်စင်တဲ့အဝတ်စနဲ့ပတ်ပြီး ဝက်ခြံပေါ်မှာ ၁၅မိနစ်လောက်ကပ်ပေးထားပါ မကြာခင်မှာပဲ ဝက်ခြံရောင်ရမ်းတာကိုသက်သာစေပြီး သေးငယ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ အရေးတကြီးအပြင်သွားမှဖြစ်မယ့်သူတွေအတွက်အရေးပေါ် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါပဲ။ ၅=ရေခဲတုံးလေးတွေက နေလောင်ဒဏ်တွေကိုလည်းသက်သာစေပါတယ် နေလောင်ထားတဲ့နေရာတွေကို ရေခဲခဏကပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ခဏလေးနဲ့ပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ ၆=မျက်လုံးအောက်နားမှာဖြစ်တတ်ကြတဲ့ မျက်အိတ်ကြီးတာကို သက်သာစေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ရေခဲကပ်ပေးတာပါ ရေခဲတုံးလေးတွေကို မျက်လုံးနေရာတစ်ဝိုက်မှာ ၁ဝမိနစ်လောက်နေ့တိုင်းကပ်ပေးပါ သိသိသာသာပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ crd သင့္ရဲ႕အသားအရည္ကို … Read more
ချစ်သူလေး စိတ်ကောက်နေတယ် ဆိုရင် ဒီလိုလေး ချော့လိုက်ပါနော်
ချစ်သူလေး စိတ်ကောက်နေတယ် ဆိုရင် ဒီလိုလေး ချော့လိုက်ပါနော် ချစ်သူ ချော့နည်းလေးများ ချစ်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတတွေထဲမှာ စိတ်ကောက်တယ် ဆိုတာကလည်း တစ်ခု အပါ အဝင်မို့လို့ ချစ်သူလေး စိတ်ကောက်နေတယ် ဆိုရင် ချော့လိုက်ပါနော်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူလေး စိတ်ကောက်နေတယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ချော့လို့ ရမလဲ ဆိုတာကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော်။ ၁။ အချစ်သီချင်းဆိုပြလိုက်ပါ သီချင်းဆိုတာ စိတ်ကို နူးညံ့စေနိုင်တဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အချစ်သီချင်း ချိုချိုလေးတွေကိုသာ သူ့မျက်နှာလေး ကြည့်ပြီး ဆိုပြလိုက်ပါ။ စိတ်ကောက်နေတာတွေက ချော့စရာတောင် မလိုတော့ဘဲ ချစ်သူ့ မျက်နှာက အပြုံးလေးတွေကို ဖန်ဆင်းလိုက်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ ၂။ အာရုံလွှဲလိုက်ပါ စိတ်ကောက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ် နောက်ထပ် တွေးနေတဲ့ စိတ်တွေ ပျောက်သွားအောင် … Read more
ကျောင်းဆရာမ အလုပ်ကထွက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားတွေကို ဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုပေးတဲ့ မိန်းမချောလေး ကျောင်းဆရာမ အလုပ်က ထွက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားတွေအတွက် ဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုပေးတဲ့ မိန်းမချောလေးမရှိဆင်းရဲသားတွေနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ အဘိုးဘွားတွေကို စောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာဟာ တကယ်မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ပါနော်။ မိန်းမချောလေး တစ်ယောက်ကလည်း စွန်ပစ်ခံ ဘိုးဘွားတေကို စောင့်ရှောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ထို မိန်းကလေးကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ အင်္ဂပိုလမ်းမကြီးဘေး သီလှကုန်းမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဘဝကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ကျောင်းပြီးတော့ ကျောင်းဆရာမအလုပ်ဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူမရဲ့ ခံယူချက်အရ အလုပ်ကထွက်ပြီးတော့ ခိုလူံရာဂေဟာကို ဟင်္သာတမြို့ လယ်တီကွင်းရပ် အောင်ချမ်းသာဘုန်းကြီးကျောင်းနားမှာ တည်ဆောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီး ပြုစုစောက်ရှောက်သူတွေမဲ့သွားတဲ့သက်ကြီးအဘိုးအဘွားတွေကို ခိုလူံရာဂေဟာမှာ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က အဘိုးဘွားတေကို သတင်းကြားလျှင်လဲ သူမကိုယ်တိုင် လိုက်ပါပြီးသွားရောက်ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သက်ကြီးဘိုးဘွားတွေတင်မကပါဘူးနော်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေ၊ မိဘမဲ့စွန့်ပစ်ခလေးတွေ၊ … Read more
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ၂ လုံး တရုတ် ဝင်မည် . နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းအဆိုးရွားဆုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ၂ လုံး ကြောင့် တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင် ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ဂျပန်ကျွန်းဆွယ်များ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ကြုံတွေ့နိုင် သိပ်မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Cempaka နဲ့ In-Fa လို့ခေါ်တဲ့မုန်တိုင်းကြီး ၂ ခုဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေ အနောက်အာရှနှင့်မြောက်ဘက်ဘက်ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဘို့တာဆူနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ CNN သတင်းမှာဖော်ပြသွားပါတယ် ။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။ Cempaka အပူပိုင်းဇုန်မုန်တိုင်းအဖြစ်ကနေ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ် အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်း ၀၅:၀၀ ခန့်မှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ် ၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းခြေကနေ ကီလိုမီတာ ၁၈၅ အကွာကနေဗဟုပြုကာ ၁ နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၁၂၀ နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည် ။ ဟောင်ကောင်ကိုတော့ တစ်နာရီလျင် ကီလိုမီတာ ၄၁ မှ ၆၂ ကီလိုမီတာအထိ ဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်နိုင်တာကြောင့် … Read more
နာတာရှည်ရင်ကျပ်ရောဂါရှိတဲ့ အသက် ရရနှစ်ကျော် ကျွန်တော့်အဖွား တောင် Oxygen မလိုဘဲ ကိုဗစ် နဲ့ ပြန်ကောင်းခဲ့ပါပြီ
နာတာရှည်ရင်ကျပ်ရောဂါရှိတဲ့ အသက် ရရနှစ်ကျော် ကျွန်တော့်အဖွား တောင် Oxygen မလိုဘဲ ကိုဗစ် နဲ့ ပြန်ကောင်းခဲ့ပါပြီ အိမ်မှာအဖွား စပြီး ဖျား ပီး နှစ်ရက်အကြာမှာ အနံ့စပျောက်ပါတယ် အနံ့ စပျောက်တဲ့နေ့ကစလို့ အဖွား စိတ်ဓာတ်ကျ ပီး အစား မစားတော့ပါဘူး အဖွားက အသက်ကြီးတော့ အိမ်ကလူတွေတော်တော်စိတ်ပူသွားတာပေါ့ အစားလည်းမစားတော့ ပိုလို့တောင်စိတ်ပူပါတယ် ဒါပေ့မယ် အိမ်မှာ ရှိတဲ့သမီးတွေ မောင်နှမတွေကောမြေးတွေကော အစားကို မစား စားအောင် စိတ်အားမငယ်အောင် စလုပ်ပီးစိတ်ဓာတ် မကျအောင် လုပ်ရပါတယ် အဝေးရောက်နေတဲ့ သမီးတွေကအစvideo call နဲ့အားပေး မြေးတွေနဲ့လည်းဖုန်းပြော တကယ်လည်း ပြန်ပျော်ရွှင်လာတာနဲ့ အစားကို အနည်းငယ်စစားလာပါတယ် အိမ်ကလူတွေဝိုင်းဖွဲ့ ပီးသူ့နားမှာနေပီးဟာသ တွေပြောကြ အစားအသောက်အမျိုးမျိုးလုပ်ပီး စားကြ သောက်ကြ နဲ့ … Read more
အသက်နဲ့ရင်းပြီး ကူညီနေတာ ထမင်းလေးတောင် မရောင်းချင်ဘူးတဲ့လားဗျာ
အသက်နဲ့ရင်းပြီး ကူညီနေတာ ထမင်းလေးတောင် မရောင်းချင်ဘူးတဲ့လားဗျာ ဒီနေ့ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်ပျက်လေး ကျွန်တော်တို့က ပရဟိတ သမားတွေပါဗျာ.. ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပီး ပြည်သူတွေကိုကူညီနေတာပါ… ဗိုက်ဆာလို့ထမင်းဆိုင်ရှေ့မှာ ကားရပ်လိုက်တယ် ဆိုင်ရှင် အမကြီးက ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဟင်းရောထမင်းရောအများကြီး…မရောင်းရဲဘူးတဲ့ ကြောက်လို့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုတွေ စိတ်ညစ်ပီး ဘာလုပ်ရမလဲမသိဖြစ်ကြတယ်… ပါဆယ် လေးတော့ရောင်းပေးပါဗျာလို့ တောင်းပန်ပြီးဝယ်ရတယ်… …အရင်ရက်တွေက ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပါသာကို ချက်စားကြတာပါ… …ဒီနေ့ က မနက်ထဲက ဘယ်သူမှမအားကြလို့ ဝယ်တာပါဗျာ… ကျွန်တော်တို့လဲ အသက်အပိုမပါပါဘူးဗျာ…. အသက်တွေရင်းပီးကူညီပေးနေကြတာပါ…. ပြန်ကူညီပေးကြပါလို့ ပြောပါရစေ…. သူရအောင် 09444556569 သကျနွယ် လူမှုကူညီရေးအသင်းပဲခူးမြို့ Positive လူနာသီးသန့်ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ Crd အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး ကူညီေနတာ ထမင္းေလးေတာင္ မေရာင္းခ်င္ဘူးတဲ့လားဗ်ာ ဒီေန႔ ျဖစ္တဲ့ အျဖစ္ပ်က္ေလး ကၽြန္ေတာ္တို႔က … Read more
အောက်စီဂျင်စက်ရုံတည်ချင်သူများအတွက် သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကွက်ကို အခမဲ့လှူပေးမယ့် သရုပ်ဆောင် နေထူးနိုင်
အောက်စီဂျင်စက်ရုံတည်ချင်သူများအတွက် သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကွက်ကို အခမဲ့လှူပေးမယ့် သရုပ်ဆောင် နေထူးနိုင် ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်နေထူးနိုင်ကတော့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ူဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့မင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေထူးနိုင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူအတန်းရက်ရော တဲ့နေထူးနိုင်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ပြီး တော်လှန်ရေးကြောင့်ခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူများကိုလဲလှူဒါန်းပေးနေခဲ့ပါတယ်..။ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ကူးစက်မှုတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့များပြားလာပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်မ လုံလောက်မှုကြောင့်လဲ အ သက်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူတွေလဲများပြားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်အလှူရှင်များကလဲ အောက်ဆီဂျင်တွေအလွယ်တကူရနိုင်ဖို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ပါနေပါဝင်လှူဒါန်းပေးနေ ကြ ပါတယ်..။ သရုပ်ဆောင် နေထူးနိုင် ဟာဆိုရင်လဲအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ ဆောက်လုပ်ချင်သူများအတွက်မြေနေရာကို အခမဲ့ငှားရန်းပေးမယ့်အကြောင်း ကိုအခုလိုပြောကြား လာပါတယ်။ နေထူးနိုင်ကရေနံချောင်းမှာ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံထောင်ချင်ရင်မြေနေရာ အခမဲ့အငှားအလှူပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ ဆိုပြီးတော့သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာ မျက်နှာ ကနေတစ်ဆင့်ရေး သားဖော်ပြထားပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆု မွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ Credit ေအာက္စီဂ်င္စက္ရံုတည္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ေျမကြက္ကို အခမဲ့လႉေပးမယ့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနထူးႏိုင္ ခ်စ္လွစြာေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ … Read more
မျက်ကွင်းညိုတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၇) ခု
မျက်ကွင်းညိုတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၇) ခု အိပ်ရေးပျက်တာ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တာ၊ ပင်ပန်းတာတွေကြောင့် ကျွန်မတို့အမျိုးသမီး အများစုမှာ မျက်ကွင်းညိုတာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို မိတ်ကပ်နှင့် ယာယီဖုံးကွယ်နိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဒီပြဿနာကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာကို အိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကုစားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သခွားသီး+ဆန်မှုန့်+ဗီတာမင်အီး+ဂျုံမှုန့် သခွားသီးတွေမှာ သွေးလည်ပတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသော ဗီတာမင် Kနှင့် သွေးကြောလည်ပတ်မှုကိုကူညီပေးတဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆန်မှုန့်မှာ ဖြူဖွေးစေတဲ့ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်အီးက အသားအရေကို လတ်ဆတ်နုပျိုစေတဲ့ အင်တီအောက်ဆှဒင့် ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်က မျက်ကွင်းညိုတာကို လျော့ချပေးပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်း သခွားသီး တစ်လုံးကိုယူပြီး ပါးပါးလေးတွေလှီးပါ။ Blender ထဲမှာ ထည့်မွှေပြီး … Read more
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် ယနေ့ ညနေအထိ ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၅ခုတွင် မိုးကြီးမယ်